Raggii ka dambeeyay weerarkii Masjidka Nabigeena oo la diley | shumis.net
Home » islam » Raggii ka dambeeyay weerarkii Masjidka Nabigeena oo la diley
Raggii ka dambeeyay weerarkii Masjidka Nabigeena oo la diley
Labadii nin ee ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday Masjidka Nabigeena Muxamed NNKH ee magaalada Barakeysan ee Madiina ayaa lagu diley is rasaaseyn ka dhacday magaalada Riyaad ee dalka boqortooyada Sacuudiga.
Tayea Salem Yaslam Al-Sayari, ayaa waxaa diley ciidanka amniga dalka Sacuudiga kaas oo maleegey shirqoolkii lagu weeraray Masjidka Nabigeena Muxamed NNKH, sanadkii la soo dhaafay.
Al-Sayari, ayaa la sheegay in uu ahaa qofka sameeyay suunkii ka sameysnaa qarax ee lala galay Masjidka , isagoo sidoo kale diyaariyay qaraxyadii lala eegtay Isbitaalka Dr. Soliman Fakeeh oo ku yaala magaalada Jaddeh 4 bishii Luul , 2016, sidoo kale waxaa uu ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday isbitaal ay leeyihiin ciidanka gaarka ah ee Sacuudiga oo ku yaala magaalada Abha ee koofurta dalkaas, 9 August ee sanadkii 2015.
Laamaha amniga ee dalka Sacuudiga ayaa waxaa ay sheegeen in Al-Sayari, uu yahay nin khatar ah isla markaana ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan ururka Daacish kuna takhasusay sameynta qaraxyada.
Ninka labaad ayaa ahaa Talal Bin Samran Al-Saedi, iyadoo howlgalka lagu diley labadaan nin uu ka dhacay degmada Yasmeen oo ku taala waqooyiga magaalada Riyaad.
Labadaan nin ayaa waxaa ay yihiin muwaadiniin u dhashay boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Markii ay ciidanka amniga weydiisteen in ay isa soo dhiibaan ayay bilaabeen in ay iska caabin sameeyaan isla markaana ay isku dayaan in ay baxsadaan ayaa la toogtay labada nin ee la baadi goobayay, waxaana ay xirnaayeen walxaha qarax, sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradd arimaha gudaha Maj. Gen. Mansour Al-Turki oo shir jaraa’id qabtay.
Ma jiro ilaa iyo hadda qof rayid ah oo ay waxyeelo soo gartay intii howlgalka uu socday, hase yeeshee mid kamid ah askarta howlgalka sameysay ayaa dhaawac fudud soo gaaray.
Guriga ay deganaayeen labadan ruux ayaa laga heley dhowr qori, bomka gacanta lagu farsameeyay iyo suun qaraxa ka sameysan.
“Tayea Al-Sayari ayaa ahaa arday minxo waxbarasho ka heley dalka New Zealand isagoo bartay maadada Engineering-ka. Waxaa uu intaa ka dib uu aaday dalka Suuriya oo uu ku biiray Daacish, isagoo tagay dalka Turkiga oo muddo kadibna u safray Suudaan oo kadibna dalka Yemen yimid, markaas kadib ayuu ku soo laabtay dalka Sacuudi Carabiya isagoo qorsheeyay weeraro argagaxiso,” sidaa waxaa sheegay saraakiil Sacuudiga u dhashay.
Title: Raggii ka dambeeyay weerarkii Masjidka Nabigeena oo la diley
Posted by Unknown, Published at January 11, 2017 and have 0 comments